रोबर्ट बर्न्स सबैभन्दा प्रसिद्ध स्कटिश कविविना २२२ वर्ष। Poems कविता | वर्तमान साहित्य
आज त्यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण वार्षिकोत्सव पनि छ, त्यो मृत्यु, आज २२२ वर्ष पहिले, सबैभन्दा प्रसिद्ध स्कटिश कविबाट, रोबर्ट बर्न्स पक्कै पनि हामी सबैले सुनेका छौँ (र गाउने प्रयास) एक सार्वभौमिक मेलोडीको साथ जसमा सेक्सनका मानिसहरूले वर्षलाई बिदाइ दिन्छन्, Auld ल्यांग Syne। तर त्यहाँ असंख्य छन् कविता र गीतहरु। म थोरै समीक्षा गर्दछु उसको जीवन र उनीहरूमध्ये केही कविताको यो महान सम्झना गर्न।
1 रोबर्ट बर्न्स
2 कविता र गीतहरु
2.1 Auld ल्यांग Syne
रोबर्ट बर्न्स जन्म भएको थियो स्कटल्याण्ड १1759 in मा र केवल बाँच्यो 37 वर्ष। तर यसको छोटो अस्तित्वको बाबजुद पनि यसले कविता र गीतहरूको ठूलो विरासत छोडेको छ र अझै कायम छ, आश्चर्य, मनोरञ्जन र मूलमा सर्ने शक्ति। उहाँ पक्कै पनि सबैभन्दा राम्रो ज्ञात र सबैभन्दा प्रभावशाली स्कटिश कवि हुनुहुन्छ।
को परिवार नम्र किसानहरूउहाँ सात दाजुभाइ दिदीमध्ये जेठो हुनुहुन्थ्यो र उनका बुबा चाहनुहुन्थ्यो कि उनीहरूले खेतमा काम गर्नुका साथै उनीहरूका बच्चाहरू शिक्षित भएको र पढ्न र लेख्न सिकेको थियो। संग 27 वर्ष रबर्ट उसले ख्याति पायो तपाईंको पहिलो कविता संग्रह प्रकाशित गरेर, स्कटिश भाषामा मुख्य रूपमा कविताहरू, जसले एडिनबर्गको बौद्धिक अभिजात वर्गलाई प्रभाव पारेको थियो।
यो एक थियो उत्कट स्कटिश र उनले सँधै आफ्नो किसानको उत्पत्तिलाई माया गरे। उनका कामहरू प्रायः समस्याहरूसँग सम्बन्धित थियो जसले निम्न वर्गहरूलाई असर गर्थ्यो र ऊ जोड दिन चाहान्थ्यो सामाजिक समानता.
कविता र गीतहरु
तिनीहरूलाई प्राय: तीन मुख्य कोटीहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ: दार्शनिक, रोमान्टिक र हास्यपूर्ण, तर तिनीहरू पनि एक भन्दा बढी कवितामा समाहित छन्। ती मध्येका हुन्: प्रेम र स्वतन्त्रता, टम ओ शान्टर, हाईल्याण्ड मैरी, दुई कुकुरहरू, एक मायालु चुम्बन, मरियमलाई स्वर्गमा o राईको माध्यमबाट आउँदैछ।
Auld ल्यांग Syne
(पुरानो समयको लागि)
पुरानो मित्रता बिर्सनु पर्छ
र कहिल्यै याद छैन?
र पुरानो दिन?
पुरानो दिन मेरो साथी
पुरानो समयका लागि:
हामीसंग सौहार्दको गिलास हुनेछ
पुरानो समय को लागी।
हामी दुबै तल ढल्केका छौं
र राम्रा डेजीहरू उठायो,
तर हामी घोर खुट्टाको साथ धेरै गलत भएका छौं
पुरानो दिन पछि।
राम्रो पुरानो दिनको लागि, मेरो साथी ...
हामीले दुबै स्ट्रिमलाई वेड गरेका छौं
दिउँसोदेखि बेलुकाको खाना सम्म,
तर हाम्रो बीचमा विशाल समुद्री गर्जन छ
र यहाँ एक हात छ, मेरो विश्वासी मित्र,
र हामीलाई तपाईंको एउटा हात दिनुहोस्,
र गरौं बियरको हार्दिक पेय
पुरानो समयको लागि!
मेरो मुटु पीडित छ, र मेरो आँखाबाट आँसु झर्छन्;
लामो समयदेखि मेरो लागि खुशी नै अनौंठो भयो।
बिर्सिएको र साथीविना म हजारौं हिमालहरु सहन्छु,
मेरो कान मा एक मीठो आवाज को लागी बिना।
तपाईंलाई माया गर्नु नै मेरो खुशी हो, र तपाईंको आकर्षणलाई गहिरो चोट पुर्‍याउँछ;
तिमीलाई माया गर्नु नै मेरो दु: ख हो, र यो दु: खले देखाएको छ;
तर घाइते मुटु जुन अब मेरो छातीमा बग्छ
यो एक अथक प्रवाह जस्तो लाग्छ जुन चाँडै अन्डु हुनेछ।
ओह, म हुँ भने - म खुशी खुशी पार्न सक्छ भने, म सक्छ -
तल युवा प्रवाहमा, थकित हरियो महलमा;
किनभने त्यहाँ उनी स्थायी धुनहरूका बीचमा घुम्छन्
तपाईंको आँखाबाट त्यो सुख्खा फाल्ने।
रातो, रातो गुलाब
ओ मेरो माया रातो गुलाब जस्तो छ
जुन जुन मा खिल।
मेरो माया धुन जस्तो छ
तिमी मेरो प्यारो प्रिय हो
मेरो प्रेम कति गहिरो छ
कि म तिमीलाई प्रेम गर्न जारी राख्नु हुनेछ
समुद्रहरू सुकिसके सम्म
जब सम्म समुद्रले मेरो प्रेम सुक्दैन
ढु the्गा घामसँग पग्लियो
म तिमीलाई माया गर्न छोड्छु, मेरो प्रेम,
जब सम्म जीवन अवस्थित छ।
र म तिमीलाई बिदाई दिन्छु, मेरो एक मात्र प्रेम,
म तिमीलाई केहि समयको लागि बिदाई गर्छु
तर म फर्कनेछु, मेरो प्रेम
यद्यपि यो हजारौं माईल टाढा छ
ओह! तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, जीव क्रल गर्दै?
तपाईं कसरी आफ्नो खुट्टा यो जस्तो राख्न हिम्मत गर्नुहुन्छ
यस्तो सुन्दर महिलाको बारेमा!
आफ्नो डिनर कतै खोज्नुहोस्
केहि गरीब शरीर मा।
जिद्दी बम मन्दिरमा जानुहोस्।
त्यहाँ तपाईं क्रल, झुट र रोल गर्न सक्नुहुन्छ
तिम्रो साथीहरूसँग, गाई-वस्तुलाई आक्रमण गर,
भीड र राष्ट्रहरूमा;
जहाँ कुनै सी horn वा हड्डी कंघी छैन
यसको बाक्लो बगैंचामा।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » रोबर्ट बर्न्स सबैभन्दा प्रसिद्ध स्कटिश कविविना २२२ वर्ष। Poems कविताहरू
फ्रान्सिस्को टेजेडो टोरेंट, III कार्मेन मार्टेन गाइट पुरस्कारको विजेता।